Home Wararka Hirshabelle oo shaacisay Doorashada Laba kursi oo lagu tartamayo iyo Kursigii khilaafka...
Hirshabelle oo shaacisay Doorashada Laba kursi oo lagu tartamayo iyo Kursigii khilaafka dhaliyay..
Guddiga Doorashada Hirshabelle ayaa shaaciyey qabashada doorashada laba kursi oo ka mida Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Kuraasta kala ah: HOP#011 iyo HOP#063 ayaa doorashadooda la qabanayaa 22-ka Maarso, iyadoo dib loo dhigay kursigii khilaafka dhaliyey ee xilka looga qaaday Guddoomiyihii hor ee Guddiga SEIT Hirshabeelle HOP135.
Diiwaan gelinta ergada iyo Murashixiinta labada kursi ayaa dhaceysa laba maalmood gudahood, waxayna kuraastan noqon doonaan kuwo lagu tartamo, sida uu shaaciyey xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle.
Kursiga HOP011 waxaa hore ugu fadhiyey wasiirkii hore ee amniga dowladii Xasan Sheekh o ka mida xisbiga UPD C/risaaq Cumar Maxamed, wuxuuna wajahayaa tartan adag.
Kursiga HOP063 ayaa waxaa hore ugu fadhiyey Wasiirkii hore ee Waxbrashada C/llaahi Goodax Barre, waxaana heysta xaalad adag sidii uu dib ugu soo laaban lahaa.
Previous article[AKHRISO] Caqabadah haaysta Deni in uu Madaxweyne noqdo
Next articleKoronto la’aan baahsan oo ka jirta magaalada Xudur, ee Gobolka Bakool
Maamulka Faraajo oo ka hor yimid doorashadii Axmed Madoobe
[Qormadii Koowaad] Sidee ku noqon kartaa Kheyre oo kale?